रातु खोलाको अवैध उत्खननको जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठनको माग ! - Mahottari Post
रातु खोलाको अवैध उत्खननको जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठनको माग !
७ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २०:१३
अमृत कुमार महतो, महोत्तरी
प्रतिनिधि सभामा रातु खोलाको अवैध उत्खननको जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठनको माग उठेको छ । सांसद इन्दु शर्माले चुरे दोहनले मधेश मरुभूमी बनाउने काम भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानार्षण गराएका छन् । आज संघीय सदनमा बन्दै उहाँले भन्नुभयो, विगत १० बर्षदेखि महोत्तरीको रातु खोलाबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको व्यापक तस्करी भईरहेको छ ।
हालको वर्षहरुमा देशका विकासका काम तिर्व भएदेखि तस्करहरुले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खन्न गर्ने ऐन कानुन विपरित रातु खोलाको पुल र गाउँ बस्ति नजिकबाट माफदण्ड विपरित गैर कानुन तरिकाले ठुला – ठुला डोजर र टिपर प्रयोग गरी १० फिट देखि १२ फिट सम्म खाल्टो बनाई रातु खोलाको चरम दोहन गरेका छन् ।
दैनिक सैकडौ टिपर र ट्याक्टरले रात भरी उत्खन्न गरेर तस्करी गरेका छन् । सबै स्थानिय निकाय र राष्ट्रिय मिडियाहरुले पनि रातु खोलाको दोहन बारेमा सर्वजानिक गरिरहेका छन् ।
यसरी राष्ट्रिय सम्पतीको ब्रहम लुट भईरहदा स्थानिय सरकार, सुरक्षा निकाय र बर्दिबासमै कार्यालय खोलेर बसिरहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के हेरेर बसेका छन् । यसरी दिनुहु रातु खोलाको दोहनले मधेशको भविष्य संग जोडि रहेको चुरे क्षेत्रलाई पनि ठूलो असर रहेको छ ।
राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन गर्ने माथि छानविन गरी कडा कार्वाही गर्नको लागि न्यायिक छानविन समिति गठनका लागि सरकारको ध्यानार्षण गराउन चाहन्छौ ।